Electronics Industry - Luoyang esorowo Tungsten-Molybdenum Ihe Co., Ltd.
Magburu onwe thermal conductivity, a na-achịkwa ọnụọgụ nke thermal mgbasa na pụtara ìhè ihe-adị ọcha. Zuru okè: Anyị na n'ihi na ngwá electronic ụlọ ọrụ nwere pụrụ nnọọ iche nkịtị Njirimara. Eji dị ka isi efere na okpomọkụ spreaders, ha hụ na a pụrụ ịdabere na ọkụ na ngwá.
Ke akpa ilekiri, eziokwu ahụ bụ na ọkụ na mmiri n'ịwa okpomọkụ ga-adịghị ka ihe ga ihe ọ bụla iji na-echegbu onwe banyere. N'oge, ihe fọrọ ọ bụla schoolchild nwere ike ịgwa gị na akụkụ ụfọdụ nke a na kọmputa na-na-ekpo ọkụ mgbe ọ na-Switched na. Mgbe ngwaọrụ na-arụ ọrụ, a nkezi nke ọnọ eletriki ike na-efu dị ka okpomọkụ. Ma ka anyị na-elerukwu anya: The nyefe nke okpomọkụ nwekwara ike igosipụta dị ka okpomọkụ agbanwe oge kwa unit (nke) ebe (okpomọkụ agbanwe oge njupụta). Dị ka ihe atụ na eserese atụ, okpomọkụ agbanwe oge njupụta ọtụtụ latrik nwere ike ókè. Dị elu dị ka na a rọketi nozulu akpịrị na nke okpomọkụ dị elu dị ka 2 800 ° C pụrụ ibilite.
The ọnụọgụ nke thermal mgbasa bụ ihe ọzọ dị oké egwu na-akpata ihe niile Semiconductors. Ọ bụrụ na ndị okporo ọkụ na isi efere ihe mụbaa na nkwekọrịta n'ọtụtụ dịgasị iche iche mgbe ọ gụrụ mgbanwe okpomọkụ mgbe n'ibu nsogbu na-ebilite. Ndị a nwere ike imebi okporo ọkụ ma ọ bụ imebi njikọ dị n'etiti mgbawa na okpomọkụ spreader. Otú ọ dị, na anyị ihe, ị maara na ị na-ke mma aka. Anyị ihe nwere kacha ọnụọgụ nke thermal mgbasa maka ijikọta Semiconductors na ceramik.
Dị ka okporo ọkụ isi efere, n'ihi na ihe atụ, anyị ihe na-eji ifufe turbines, ụgbọ okporo ígwè na ulo oru ngwa. Na ike okporo ọkụ modul maka inverters (thyristors) na ike diodes, ha na-egwu a dị oké egwu ọrụ. N'ihi gịnị? N'ihi na ha kacha ọnụọgụ nke thermal mgbasa na magburu onwe thermal conductivity, okporo ọkụ isi efere etolite ike isi n'ihi chebaara sịlịkọn okporo ọkụ ma hụ na a modul ọrụ ndụ isua 30.
Okpomọkụ spreaders na isi efere mere si molybdenum, tungsten, MoCu, WCu, Cu-MoCu na Cu-MoCu-Cu laminates reliably dissipate okpomọkụ site na eletriki mmiri. Nke a ma na-egbochi ndị ekpo oke ọkụ nke ọkụ na ngwaọrụ na enwekwu ngwaahịa ndụ. Anyị okpomọkụ spreaders aka ịnọgide na-enwe a jụụ na gburugburu ebe obibi, ihe atụ, na IGBT modul, RF nchịkọta ma ọ bụ Ikanam ibe. Anyị mepụtara a pụrụ nnọọ iche MoCu mejupụtara ihe maka ụgbọelu efere na ikanam ibe. Nke a nwere a ọnụọgụ nke thermal mgbasa yiri nke sapphire na ceramik.
Anyị na-enye anyị na ngwaahịa ndị ngwá electronic ụlọ ọrụ na a dịgasị iche iche nke coatings. Ha na-echebe ihe megide corrosion ma melite solder njikọ n'etiti okporo ọkụ na ihe onwunwe anyị.
Molybdenum mpempe akwụkwọ, Tzm Sheet, Molybdenum efere, Tzm Plate, Molybdenum Rod, Molybdenum,